यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! - hamro Desh
यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ !
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मानिसहरुले जे काम पनि अनलाइनको माध्यमबाट गर्न थाले। आजकल अनलाइनबाटै नोकरी पाउन सकिन्छ भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन थालेको धेरै समय भएको छैन । इन्टरनेटको दुनियाँमा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेबसाइटहरु हुन् eBay, OLX र quikr यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नुहुन्छ ।
विदेशमा पुराना नोटहरु बिक्रि गर्ने चलन पहिले देखि नै थियो । यो आजभोली नेपालमा पनि त्यतिकै मजाले चल्न थालेको छ। राणा शासनमा काटिएका पुराना नोटको मूल्य अहिले लाखौं पर्ने गर्दछ ।
नेपाली पुरानो नोट कसरी बिक्रि गर्ने इन्टरनेटमा ?
– eBay को एउटा खाता खोल्नुहोस ।
– आफु सँग भएको पुरानो नोटको एउटा ठुलो साइजमा क्लियर फोटो खिच्नुहोस् ।
– नोटको विवरण, सिरियल नम्बर, कुन समयमा छापिएको हो सबै उल्लेख गर्नुहोस।
– तपाईले खिचेको नोटको सफा फोटोलाइ ebay को वेबसाइटमा अपलोड गर्नुहोस ।
– कसैले किन्न आए आफुले कति सम्ममा दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ ।
eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भनेर जे पायो त्यहि अपलोड नगर्नुहोला। eBay को नियमअनुसार नक्कली सामग्री बेच्न पाइदैन त्यसैले सत्य र सहि चिज मात्र बिक्रि गर्न सकिन्छ । eBay एउटा माध्यम मात्र हो तर डिल भने व्यक्तिगत तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ ।
यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने eBay को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ। त्यहाँ रु.५ देखि रु.१०० सम्मका नेपाली नोट अपलोड गरिएका छन्। उक्त वेबसाइटमा गएर auction बटनमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको नोटमा कति जना मानिसले खरिदको लागि विड गरेका छन् सबै हेर्न मिल्छ ।
यदि तपाईसँग धेरै पुराना नोटहरु छन् भने इच्छाअनुसार इन्टरनेटमा बेच्न सक्नुहुन्छ । तपाईले आफूसँग भएको नोटको जुन मार्केट भ्यालु छ त्यो भन्दा १० गुणा धेरै पैसा नोट बेचेर कमाउन सक्नुहुन्छ । प्रायजसो चिनियाँ, इन्डियन, अमेरिकी लगाएत विश्वका विभिन्न देशबाट मानिसहरुले यस्ता पुरानो नोट खरिद गर्छन ।